သူရဲ့​မွေး​နေ့​လေးကို surprise တိုက်​​ ပေး ကြတဲ့သူ​တွေကို ​ကျေးဇူးတင်​စကား ဆိုလိုက်​တဲ့ ခင်​လှိုင်​ - VPS - Shweman Online Media
admin | April 18, 2020 | Celebrities | No Comments
မြန်​မာနို င်​ငံရဲ့နာမ ည်ေ ကျာ်​ဇာတ်​ပို့တစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ ခင်​လှိုင်​နဲ့ ပရိသတ်​​တွေ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်​မယ်​ထင်​ပါ တယ်​။ ခင်​လှိုင်​က​ တော့ ဇာတ်​ကားတိုင်းလိုလို ကျရာဇာတ်​ရုပ်​ကို ကာရိုက်​တာပီပြင်​​အောင် ​သရုပ်​​ဆောင်​နိုင်​တဲ့ သူတစ်​ဦးဆိုလည်းမမှား​လောက်​ပါဘူး​နော်​။
ခင်​လှိုင် ​ဟာဆိုရင်​ သူရဲ့ရသမျှအနု​ပညာ​ကြေး​လေးထဲမှ တတ်​နိုင်​သ​လောက်​​လေး​နဲ့ လိုအပ်​​နေတဲ့သူ​တွေကို ကုသိုလ်​ယူလှူဒါန်း​နေ တဲ့သူတစ်​ ဦးပြဲ ဖစ်​ပါတယ်​။
ခင်​လှိုင်​တို့မိသားစု​လေးဟာဆိုရင် ​ပရိသတ်​​တွေရဲ့အားကျရဆုံး ဖြစ်​တဲ့မိသားစုတစ်​စုအဖြစ်​အပါအဝင်​ဖြစ်​ခဲ့တာပါပဲ​နော်​။
ခင်​လှိုင်​ရဲ့(53)နှစ်​ပြည်မွေးနေ့လေးမှာဆိုရင်သူက”ကျွန်တော် လုံးဝကိုမျော်လင့်မထားဘူး ခုလိုအချိန်မျိုးမှာ မွေးနေ့အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတွေ ကျွန်တော့ကိုပို့ပေးနိုင်ကြမယ်လို့ကိုမထင်ထားတာပါ.
ညကကျွန်တော်အစောကြီးအိပ်ပျော်နေချိန်မှာ.ကျွန်တော်ချစ်သောသားသမီးတွေက..ကျွန်တော်အတွက်မွေးနေ့ကိတ်လေးကိုရအောင်မှာပြီးည ၁၂:၀၀ မှာအမှတ်မထင်ကျွန်တော့်ကိုအိပ်ယာနှိုးပြီးေ ပျာ်အောင်ဖန်တည်းပေးကြတယ် ကိတ်မုန့်လေးကချစ်စရာကောင်းပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်.
ကျေးဇူးပါ ဖေဖေ ချစ်သော..မိသားစုကြီးရယ်..မနက်က ကျွန်တော်အစောကြီးအိပ်ယာထပြီးဘုရားဝတ်ပြု ပဌာန်းပူဇော်ပြီးချိန်မှာ..ဖုန်းဝင်လာတယ်။ အိမ်ရှေ့မှာပန်းစည်းရယ် မွေးနေ့ကိတ်ရယ် နာရီဘူးလေးရယ်လာပို့တာပါတဲ့..
.ကျွန်တော်လဲဘယ်သူပို့မှန်းမသိဘူးလာပို့ပေးတဲ့သူကိုမေးတော့ကျွန်ေ တ်ာလဲမသိဘူးပို့ခိုင်းလို့လာပို့ပေးတာတဲ့..ဘယ်သူပို့တာလဲ လို့တွေးေ နချိန်မှာ..ဖုန်းဝင်လာ တယ်..မန္တလေးအ ညာမြေစားဖွယ်စုံမှ ချစ်သောညီလေး+ချစ်ညီမလေးတို့မိသားစုက ပို့ပေးတာ..
ကျေးဇူးတင်ပြီးအရမ်းချစ်ပါတယ် ချစ်ညီလေး+ချစ်ညီမလေးရယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံပုံလေးကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရုပ်တုသေးသေးလေးအဖြစ် သေသေချာချာအော်ဒါမှာပြီး စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်တဲ့သားနှင့်သမီးက+သုခရွှေပြည်စတိုးဆိုင်သားတို့ သမီးတို့ကို လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အထူးခြားဆုံးလက်ဆောင်လေးကတော့ ကျွန်တော့အသဲတုံလေးရွှေပိုးရဲ့ပန်းချီလက်ရာမွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပါ ဖိုးဖိုးချစ်မြေးလေးအာဘွားဒီနေ့မှာမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြသောကျွန်တော့ကိုချစ်ခင်ကြသောချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ
အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်”လို့ ဆိုကာ သူရဲ့​မွေး​နေ့​လေးကို surprise တိုက်​လို့ ​ဝမ်းသာ​နေတဲ့ အ​ကြောင်းကို လူမှုကွန်​ယက်​စာမျက်​နှာ​ပေါ်မှာတင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်​​ကြီးကလည်း ခင်​လှိုင်ရဲ့​မွေး​နေ့​လေးမှာ ​ပျော်​ရွှင်​​​နေသလို အ​ပျော်​​တွေကူး​စေမယ်​လို့လည်းထင်​ပါတယ်​။
ခီမောင်နှံနှ င့် စေတနာရှင်တွေ ရဲ့ ကူညီထော က်ပံ့မှု၊ တကယ် လိုအပ်နေသူတွေဆီကို ရောက်ပါပြီ